कस्तो रहला तपाईको बुधबारको भाग्य ? भदौ ३० गतेको राशिफल हेर्नुहोस् - Nice Samachar
कस्तो रहला तपाईको बुधबारको भाग्य ? भदौ ३० गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १८:२६ 43 पटक हेरिएको
मकरः पारिवारिक माहोलमा समय बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । घरायसी व्यापारमा समय व्यतित हुने तथा लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बको सहयोग पाईनाले कामहरु तीव्र गतिमा अगाडी बढाउन सकिनेछ। रमाउन चाहनेहरुका लागि समय राम्रो रहेको छ । बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै धेरै काम गर्न सकिनेछ ।